सोच - Samata Khabar
“अनि नानीको जात चाहिँ के प¥यो ?”– घरबेटी सोध्छन् । “दमाई”– निर्धक्कसाथ दिएँ मेरो जवाफ । “ए नानी त उसो भए दलित पो पर्नुभएछ, अब के गर्नु ! मेरा घरमा बुढा बाआमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू अलि पुरानो सोचवाला हुनुहुन्छ । हामीलाई त केही थिएन जे जातै भए नि ! तर बुढेसकालमा बाआमाको चित्त पनि त […]
काठमाडौं,चैत्र ३ । दलित समुदायका हस्तीहरूले देश एवं देशवासीको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरी विवेक, विचार, श्रम र सीपले सिंगो राष्ट्रकै जगेर्ना गर्ने कार्य गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । तथापि दलित समुदायको योगदान इतिहासमा असाध्यै थोरैमात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । ०० हरेक नेपालीले बिर्सनै नहुने कुरा नेपालको एकीकरण हो । गोपाल वंशदेखि किरात शासनसम्म […]
काठमाडौं,चैत्र २ । नेपाल संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। नयाँ संविधान कार्यान्यनको एउटा महत्वूर्ण पक्ष स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो, जुन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनको परिणामपछि वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदधारण गरिसकेका छन्। संघीय संसदको कार्यसूची अनुसार फागुन २९ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। सर्वहारा जनताको […]
यही माघ ७ गते बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका ९ मुनालबस्तीका सञ्जय सुनारले सोही गाउँकै सुष्मा पाण्डेसँग प्रेमविवाह पछि गाउँमा बस्ने वातावरण नभएकोले उनीहरु ७ गतेनै गाँउबाट भागे । पे्रमविवाहपछि सञ्जय र सुस्मा गाउँबाट भागेपछि सुष्माका आफन्तको दवाबमा सञ्जयले उपल्लो जातसँग विवाह गरेको भन्दै सञ्जयका बुवा कृष्ण बहादुर सुनारलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरले थुनामा राख्यो । यद्यपी […]
दलितहरू हिन्दू समाजका अङ्ग हुन् र ?
गाईको मासु खाएकै कारण अछूत हुने भए ब्राह्मणहरु कसरी छूत भए ? हिन्दू समाजमा छुवाछूतको उत्पति सन्दर्भमा ठोस आधार आम जनसमुदायको स्तरमा छलफल भएको जस्तो लाग्दैन । हिन्दू आफैमा एउटा मिथक मात्र हो । हिन्दू नाम पनि एउटा विदेशीहरूले राखेको नाम हो । यो नाम मुसलमान समुदायले सवर्णलाई आपूmभन्दा अलग राख्ने क्रममा दिएको नाम हो […]